अन्तवार्ता | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
कोरोना विरुद्धको खोपले आत्मविश्वास बढेको छ
माघ २० गते । कोरोनाविरुद्धको खोप म्याग्दीमा पनि लगाउन सुरु गरिएको छ । खोप लगाउन सुरु गरिएपछि नागरिकहरुमा आशा जगाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट त्रसित म्याग्दीवासीहरु खोप आएपछि भने उत्साहित भएका छन् । एकवर्ष पहिला भित्रिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालभर झन्डै दुईहजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । म्याग्दीमा पनि कोरोना संक्रमणका कारण ३ जनाको […]
काठमाडौँ, माघ ११ गते । नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति पुष्टि भएको एक वर्षमा कोरोना (कोभिड–१९)विरुद्धको खोप आएको छ । बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरी भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ नामको १० लाख खोप बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेको हो । यो खोप आइपुगेसँगै यसबारे सर्वसाधारणको मात्रै नभई स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि […]
जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको कमाण्डमा छैनन्
विकल्प न्यून/बेनी चैत्र ३ गते स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो छ ? स्थानीय तहले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा उनीहरुको सहभागिता छ कि छैन । राजनीतिक दलको योजना र कार्यक्रमहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयन गरेका छन वा छैनन् । जनप्रतिनिधिबाट राजनीतिक दलले के अपेक्षा राख्छन् ? यस्तै विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) धौलागिरि […]
‘विपद विरुद्ध म्याग्दी सक्षम छ’ ः प्रजिअ अधिकारी
विकल्प न्यूज/बेनी साउन १ गते । मनसुन सुरु भइसकेको छ । म्याग्दी जिल्ला भौगोलिक रुपमा पनि सम्भावित बाढीपहिरोको जोखिममा पर्दछ । विकट र ग्रामिण वस्तीहरु पहिरोको जोखिममा छन् । अर्को तर्फ म्याग्दी,रघुगंगा र कालिगण्डकी जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने वस्तीहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । भने तीन ठूला नदीहरु जुनसुकै वेलामा पनि पहिरोका कारण थुनिन […]
मंगलामा “समृद्धिको जग बसालेका छौं” ः उपाध्यक्ष केसी
विकल्प न्यूज/बेनी बैशाख ९ गते । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको करिब दुइवर्ष हुनलागेको छ । दुईवर्षको अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिकाको समृद्धिको जग बसाल्ने काम गरेको बताउँछन् । जिल्लाको मंगला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु गाउँपालिकाको समृद्धि कसरी हुनसक्छ भनेर त्यसको जग बसाउने क्रममा छन् । साविकका ४ वटा गाविसहरु अर्मन,बावियाचौर,कुहुँ र बंरजालाई समेटेर मंगला […]
‘शैक्षिक गुणस्तरको आधार तयार पार्दैछौं’
विकल्प न्यूज/बेनी माघ २२ गते । वि.स २०४८ मा समुदायको अगुवाईमा बेनीमा स्थापना भएको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा पछिल्लो समय केही सुधारको कामहरु भएका छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने जिल्लाकै अग्रणी शैक्षिक संस्थाका हिसाबले म्याग्दी क्याम्पसले गुणस्तर सुधारको पहल गरेको छ । मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्र संकायमा कक्षा ११ देखि स्नातक तथा व्यवस्थापन संकायमा स्नाकोत्तर […]
‘बेनी–जोमसोम सडक कालिगण्डकीलाई ठूलो खतरा’
डा. वसन्तराज अधिकारी उप–प्राध्यापक, पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डा. अधिकारी कालिगण्डकीमाथि पीएचडी गरेका प्राध्यापक हुन् । पुल्चोक क्याम्पस, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उप–प्राध्यापक समेत रहेका अधिकारी बैसरी पहिरो खस्ने बेला घटनास्थलमै थिए । उनीसहितको एक अमेरिकी टोलीले बैसरी पहिरोको अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिबेदन एक महिनाभित्र सार्वजनिक हुने भएको छ । हामीसँग कुरा […]
“विकसित देविस्थान” मेरो सपना ः अध्यक्ष पिपला बुढा
विकल्प न्यूज/बेनी साउन २६ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर बिजयी हुनुभएकी मालिका गाउँपालिका ५ देविस्थानकी वडा अध्यक्ष पिपला बुढा म्याग्दीमै एक्ली महिला वडाअध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा विकसित देविस्थान बनाउने सपना बुन्नुभएको छ । लामो समय देविस्थानको सामाजिक क्षेत्रमा उहाँ क्रियाशिल हुनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि गाउँमा सञ्चालीत विभिन्न […]
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर जनताको जिवनस्तर बदल्छौं
विकल्प न्यूज/बेनी चैत १४ गते । साविकका गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मराङ, मल्कवाङ र ताकम गाविसको एक हजार ३७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलीएको धौलागिरी गाउँपालिका म्याग्दीको दुर्गम र बिकट भुगोलमा अवस्थित छ । वि.स २०६८ को जनगणना अनुसार १४ हजार १०४ जनसंख्याको बसोबास रहेको यो गाउँपालिकाको अध्यक्षको रुपमा महिला नेता थमसरा पुनले नेतृत्व सम्हालेको दश महिना […]
‘टुक्रे योजना परिणाममुखी हुदैन्’ ः अध्यक्ष जुग्जाली
विकल्प न्यूज/मालिका चैत ५ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेद्वार बनेर बिजयी हुनुभएका मालीका गाउँपालिका ७ बिमका वडा अध्यक्ष रेशम जुक्जाली (सुवीन) गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधार समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधि बन्नु अघि गाउँमा सञ्चालीत विभिन्न योजनाहरुको नेतृत्व गरेर अनुभव संगालेका युवा नेता जुग्जालीसंग बिमको विकास निर्माणको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर नवविकल्प साप्ताहिकका लागि […]
निर्माण व्यवसायी भन्दा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाठा भए ः अध्यक्ष रोका
विकल्प न्यूज/बेनी फागुन २३ गते । साविकको निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देविस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालीका गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालीत विकास आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था र तिनलाई पारदर्शी, दिगो एवं प्रभावकारी बनाउन भएको पहलका बारेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकासंग नवविकल्प साप्ताहिकका लागि गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । मालीका गाउँपालिकाले कुन क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ […]
बेनीलाई ब्यापार, पर्यटन र कृषिको केन्द्र बनाउने योजना छ ः मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ
विकल्प न्यूज/बेनी फागुन १८ गते । साविकका रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, सिंगा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पात्लेखेत गाविसलाई समेटेर बनेको बेनी नगरपालिकामा दश वटा वडा छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार अवस्थित बेनी नगरपालिका ७६.५७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलीएको छ । ब्यापार, पर्यटन र कृषिको हिसाबले सम्भावनायुक्त बेनी नगरपालिकाको समग्र विकासमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न […]
समाजसेवा खुसी साट्ने अवसर हो : कुल आचार्य
विकल्प न्यूज/पर्वत माघ १८ गते । कुल आचार्य गैर आवासीय नेपाली संघ ‘एनआरएनए’को उपाध्यक्ष हुन् । गत अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाण्डौमा भएको एनआरएनको आठौ विश्व सम्मेलनबाट उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिका धाईरिङका कुल प्रसाद आचार्य यस अगाडी यूरोप संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । बेलायतका सफल नेपाली व्यवसायी समेत रहेका […]
चुनावी सुरक्षाका लागि उच्च सर्तकता अपनाएका छौं
विकल्प न्यूज/बेनी कार्तिक ३० गते । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन अब दुइ हप्ताभन्दा कम समय बाँकी छ । शान्तिपूर्ण, निश्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था, रणनीतिलगायत विषयमा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानी । यहि मंगलबार कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार खम्बिर गर्बुजालाई […]
“साधनस्रोत परिचालन गरेर विकासको ढोका खोल्छु ”
विकल्प न्यूज/बेनी कार्तिक १४ गते । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ क मा भने अर्कै चुनावी रौनक छ। त्यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका युवा नेता विनोद केसी विशेष चर्चामा रहेका छन्। किनकि केसी प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भीमप्रसाद गौचनलाई हराएर आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धताका साथ […]